Izitayela ezi-10 ze-Ecommerce Ozozibona Zisebenza Ku-2017 | Martech Zone
Izitayela eziyi-10 ze-Ecommerce Ozozibona Zenziwa Ngo-2017
NgoLwesithathu, Februwari 1, 2017 NgoLwesine, Februwari 2, 2017 Douglas Karr
Akubanga kudala kakhulu ukuthi abathengi bebengakhululekile kangako ukufaka idatha yabo yekhadi lesikweletu online ukuze bathenge. Abazange bathembe isayithi, babengathembi isitolo, babengathembi ukuthunyelwa… bebengathembi lutho nje. Ngemuva kweminyaka, noma kunjalo, futhi umthengi ojwayelekile wenza okungaphezu kwesigamu sakho konke ukuthenga kwabo ku-inthanethi!
Kuhlanganiswe nomsebenzi wokuthenga, ukukhetha okungakholeki kwamapulatifomu we-ecommerce, ukunikezwa okungapheli kwamasayithi wokusabalalisa, kanye nesithiyo sokungena ngaphansi kwedwala ekungeneni… i-ecommerce iyakhuphuka kakhulu kukho konke ukukhula nokukhula. Ukugcina lokho engqondweni, kubalulekile ukubukela phansi ukuthi uzohlukanisa kanjani isitolo sakho ku-inthanethi.
SSL2Buy, Umhlinzeki we-SSL womhlaba wonke, uqhamuke nezindlela eziyishumi ze-eCommerce ezizobukwa ngo-2017 ezihlanganiswe kule infographic enhle:
Ukuphela Kosuku Olumnyama kanye noMsombuluko we-Cyber - ngoba awudingi ukushiya umbhede wakho ulwe nolayini, i-ecommerce inciphisa umthelela walezi zinsuku zokuthengisa nokuziphatha kokuthenga kusakazeka inyanga yonke ICyber ​​Novemba.
Okuhlangenwe nakho kokuthenga okwenziwe ngezifiso nokwengeziwe - amapulatifomu alandelela izinqumo zokuthenga kanye nokuziphatha ekugcineni anembile futhi angasiza izitolo eziku-inthanethi ukuthi zinikeze isimilo esenzelwe wena esinciphisa ukuthenga ukungqubuzana futhi sinikeze izincomo zomkhiqizo abathengi abazifunayo ngempela.
Abathengi bazoxhumana ne-Artificial Intelligence - Izingxoxo zokuthenga, ukubhuka, kanye nezinsizakalo zamakhasimende zizophendula ngokunembile nangempumelelo imibuzo yokuthenga online, kuthuthukiswe ulwazi lwe-ecommerce, kubandakanye abasebenzisi, futhi kubashayele ukukhuphula inani lenqola yokuthenga ngenkathi kunciphisa ukulahlwa.
Ukubikezela ngokunembile Ukuthengwa Okulandelayo Kwekhasimende - Ikhono lokuqoqa nokuhlaziya idatha enkulu lihlinzeka ngamamodeli wokubikezela nokubikezela okunembile kakhulu asetshenziselwa ukubeka okunikezwayo phambi komthengi ngaso leso sikhathi abasidinga ngaso.
Yenza isipiliyoni seselula sibe kuhle ngangokunokwenzeka - Iselula idlule ideskithophu kubathengi be-inthanethi abaphequlula futhi bacwaninga ngesinqumo sabo somkhiqizo esilandelayo. I-Google inikezela ngezikhombo ezihlukile zeselula ezidinga ukuthi amabhizinisi athathe indlela yeselula yokuqala yokwenza ngcono amasayithi abo e-commerce.
Ukwandisa ukulethwa kosuku olufanayo - Abathengi abangama-29% bathe bazokhokha imali ethe xaxa ukulethwa kosuku olufanayo Akumangalisi ukuthi kungani abaholi abanjengo-Amazon belethe le nsizakalo emakethe, beqhubeka nokuxwaya isidingo sokuvakashela isitolo esiseduzane.
Ukuthengisa kwezenhlalo - 70% yabathengi bathonywe izincomo zomkhiqizo nezomkhiqizo ezinkundleni zokuxhumana Ukungena ezinkundleni zokuxhumana ngokwandisa ulwazi lomkhiqizo nokukhuthaza manje sekushayela ukuthengisa, kukhuthaza abathengisi ukuthi bathuthukise amasu omphakathi asezingeni eliphakeme.
I-HTTPS edingekayo ngonyaka ka-2017 - Ngaphandle kokuxhumeka kwe-SSL, abathengi kanye nabahlinzeki be-ecommerce basengozini yokuthola idatha eyebiwe noma izinhlelo zigqekeziwe. I-Google isivele iqinisekisile ukuthi i-SSL ingenisiwe kuma-algorithms wokulinganisa, sekuyisikhathi sokuvikela wonke amasayithi onawo lapho idatha iqoqwa noma idluliswa khona.
Ukuthengisa i-omni-channel - Abathengi beMultichannel basebenzisa ngaphezulu kwezikhathi ezi-3 ngaphezu kwabathengi besiteshi esisodwa abadinga abathengisi ukuthi bakhe imikhankaso eyinkimbinkimbi elandela abathengi abangaba khona futhi ibaholele ekuthengeni noma ngabe basesitolo, kumakhalekhukhwini, noma kukuphi phakathi.
Ukumakethwa kabusha komkhiqizo - Ngokwesilinganiso, kudinga amaphoyinti ayisikhombisa ngaphambi kokuthi uhole umthengi emuva kokumaketha manje isu elibalulekile kubo bonke abathengisi be-ecommerce.
Qiniseka ukuthi ubheka lezi zinkambiso ezibalulekile ngenkathi wenza i- isu lokumaketha nge-ecommerce Ye-2017.
Tags: ukuhlakanipha okungekhona okwangempelaidatha enkuluUlwesihlanu olumnyamai-cyber mondayukulethwaukuthenga okunamandlai-ecommerce infographicizitayela ze-ecommercehttpsinfographicukuthengwa kwamaselulaomnichannel ecommerceukuthengisa i-omnichannelukumaketha kabushaukulethwa kosuku olufanayoscommerceukuthengisa kwezenhlalolokuthumelashoppingisipiliyoni sokuthengaezentengiso yenhlaloezokuhweba ngomphakathiukuthengisa komphakathissl
Amathrendi Abathengi aba-10 ngonyaka wezi-2017… Ngesixwayiso!